Curiosities Harry Potter | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | Nohavaozina tamin'ny 27/06/2017 12:30 | boky
Tamin'ny 26 Jona 1997 dia namoaka ny tantara voalohany an'ny saga Harry Potter i JK Rowling tsy fantatra, mitondra ny lohateny harry potter sy ny Philosopher's Stone, izay vetivety dia lasa fahombiazana ary tsy latsaky ny 20 taona izao. Ny sisa amin'ny tantara dia fantatry ny ankamaroan'ny olona, ​​miaraka amin'ny fahatongavan'ny boky enina fanampiny any amin'ny fivarotam-boky, ankoatry ny fanampiana be dia be ny marin'ny saga, amin'ny endrika boky, sarimihetsika ary zavatra maro hafa.
Ny mpanoratra britanika izao dia iray amin'ireo singa lehibe amin'ny literatiora manerantany, na dia tsy nitondra fahombiazana be taminy aza ny fitetezana azy tany ivelan'ny literatiora zaza tsy ampy taona. Androany sy 20 taona aty aoriana dia mbola zanany adala i Harry Potter izay nahazo azy maherin'ny 450 tapitrisa euro ary mbola lavitra ny lalana tokony ahatongavany, izay nambarany taloha be, nefa maro no mino fa tsy ho avy mihitsy.
Mba hankalazana ny fandehan'ny fotoana sy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana iray amin'ireo tranga literatiora lehibe indrindra teo amin'ny tantara, dia handinika isika Curiosities 20 momba ny mpanao majia fanta-daza amin'ny fotoana rehetra sy izao rehetra izao manodidina azy. Tsy hametra ny tenantsika amin'ny saga boky fotsiny izahay, fa hilaza aminareo koa ny fahalianana momba ny sarimihetsika sy ireo lahatsoratra marobe navoakan'i Rowling momba ny tontolony majika.
1 Curiosities 20 momba ny mpanao majia fanta-daza amin'ny fotoana rehetra
1.1 Harry Potter, JK Rowling ary Daniel Radcliffe dia tsingerintaona nahaterahan'izy ireo
1.2 Mpifanila vodirindrina amin'i Rowling ireo Potters
1.3 Miisa 11 ny sekoly mazika sy famosaviana
1.4 Dumbledore sy ny firaisana ara-nofo miafina
1.5 Hermione irery no nahazo ny anaram-boninahitra Ecstasy
1.6 Ny tahotra lehibe an'i Voldemort
1.7 Tsy hitan'ny rehetra intsony i Hogwarts
1.8 Namoaka troll ianao!
1.9 Ginny Weasly nilalao Quidditch matihanina
1.10 Misy hazakazaka dragona 10 tanteraka
1.11 Harry Potter sy ny zanany
1.12 Ny lainga lehibe avy ao amin'ny Biraon'i Dumbledore
1.13 Ny fiainana faharoa an'i Ron
1.15 Ny adin'i Hogwarts
1.16 Fahaizan'i Harry Potter very
1.17 Teddy Lupine, zanak'andriamanitra majia lehibe
1.18 Ny fahatahorana ny saka Profesora McGonagall
1.19 Majika maizina sy ny vokany
1.20 Ny fanomezam-boninahitra an'i Harry Potter ho an'i Snape
Curiosities 20 momba ny mpanao majia fanta-daza amin'ny fotoana rehetra
Manaraka izany dia lazainay aminao ny fahalianana momba an'i Harry Potter sy ny tontolony iray manontolo izay azo antoka fa tsy fantatrao;
Harry Potter, JK Rowling ary Daniel Radcliffe dia tsingerintaona nahaterahan'izy ireo
JK Rowling sy Harry Potter dia mitovy tsingerintaona nahaterahana, ny 31 jolay, na eo aza ny an'ny mpanoratra 19565 sy ny momba ilay mpanao majia tamin'ny taona 1980. Ny fahalianana dia lasa lavitra kokoa ary i Daniel Radcliffe, ilay mpilalao izay milalao an'i Harry amin'ny sarimihetsika samihafa, dia manana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany tamin'io andro io ihany .
Mpifanila vodirindrina amin'i Rowling ireo Potters
Ny anarana farany Potter dia nofidian'ny mpanoratra anglisy nentanim-panahy avy amin'ny mpifanila vodirindrina aminy, ary ny Potters dia fianakaviana iray nonina trano efatra tany an-dafy izay nonenan'i Rowling fony izy mbola kely. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao ary rehefa ela ny ela, ny mpiara-monina aminy dia nilaza na inona na inona mihitsy, ary tsy fantatray ihany koa fa nieritreritra izy ireo fa nampiasa ny anarana nomeny i Rowling hametrahana izany amin'ny mpanao majia malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Miisa 11 ny sekoly mazika sy famosaviana
Hogwarts no sekoly majika malaza indrindra amin'ny majika, saingy tsy izy irery ary misy sekoly mazika 11 miely eran'izao tontolo izao. Toy ny azo vakiana amin'ny boky fantatsika hogwarts any Ekosy, Beauxbatons any Frantsa, Durmstrag any Alemana, Ouagadou, any an-tendrombohitra amin'ny Volana any Afrika, Mahoutokoro, amin'ny Nosy volkano kely any Japon ary Ilvermore, any Etazonia. Na ny anarany na ny antsipirian'ny sekoly sisa dia tsy fantatra.
Dumbledore sy ny firaisana ara-nofo miafina
Tsy miresaka momba ny firaisana ara-nofo an'i Dumbledore, talen'ny Hogwarts mihitsy ireo boky ireo, na dia tao amin'ny sarimihetsika fahenina JK Rowling aza dia tsy maintsy nanao fanitsiana mba tsy hisehoan'ny tantaram-pitiavana eo amin'ny tovovavy sy ny talen'ny fisehoana. Tsy noheverin'ilay mpanoratra fa ilaina ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo nataon'i Dumbledore, saingy nazava taminy hatrany fa toetra pelaka izy.
Hermione irery no nahazo ny anaram-boninahitra Ecstasy
Hermione, tamin'ny fampisehoana bebe kokoa ny fahaizany sy ny fahavononany, dia niverina tany Hogwarts hamita ny fianarany ary haka azy Lohateny ecstasy. I Harry sy i Ron, amin'ny lafiny iray, dia tsy nanao izany mihitsy, nijanona tsy nahatratra ny anaram-boninahitra notratrarina, na dia eo aza ny fisehoan-javatra dia tsy dia nisy nilana azy ireo loatra.
Ny tahotra lehibe an'i Voldemort
Ny boggart izay eo anilan'i Voldemort dia hanova ny fatiny, ary io no atahoran'ny tompon'ny maizina dia ny fahafatesany. Iza izao no sahy miatrika ny iray amin'ireo zavaboary mahatsiravina sy ankahalaina indrindra amin'ny literatiora?
Tsy hitan'ny rehetra intsony i Hogwarts
Si muggle hita hogwarts, zavatra somary tsy azo inoana, ny hany zavatra ho hitany dia ny trano mimanda sy famantarana manirery izay hapetrany; "Andehana mandeha! Rava mampidi-doza ". Raha, amin'ny lafiny iray hafa, ianao dia mpamosavy ary mandra-pahatongan'izany fotoana izany dia tsy nahalala azy ianao dia hahita ny sekoly majia sy mpamosavy amin'ny famirapiratany rehetra.
Namoaka troll ianao!
Amin'ny sekoly rehetra, ny naoty ratsy indrindra azonao dia ny aotra na tsy fahombiazana mivantana, fa amin'ny Hogwarts dia tsy mitovy ny zava-drehetra ary ny isa ratsy indrindra azonao dia ny Troll. Midika koa izany fa lavitra ny mpanao majia ianao.
Ginny Weasly nilalao Quidditch matihanina
Ginny Weasly dia kintana Quidditch goavambe, saingy taorian'ny nivoahany fahombiazana lehibe dia nanapa-kevitra ny hisotro ronono izy hananganana fianakaviana iray miaraka amin'i Harry Potter. Nanjary iray tamin'ny mpanao gazety Quidditch ho an'ny Mpaminany isan'andro malaza koa izy.
Misy hazakazaka dragona 10 tanteraka
Ao amin'ny tontolon'ny Harry Potter dia misy hazakazaka dragona 10, na dia tsy dia misy antsipiriany momba azy ireo aza ao amin'ireo boky.
Harry Potter sy ny zanany
Ny anarana feno an'ny zanakalahin'i Harry Potter dia; James Sirius, Albus Severus ary Lily Luna Mazava ho azy fa mahafantatra antsipiriany bebe kokoa isika amin'ny fandehan'ny fotoana sy ireo fanontana vaovao nataon'i JK Rowling.
Ny lainga lehibe avy ao amin'ny Biraon'i Dumbledore
Ireo boky izay miseho ao amin'ny biraon'i Dumbledore isaky ny horonantsary izay efa hitantsika rehetra, dia tsy tena izy ary izany dia araka ny filazan'ny mpikambana maro amin'ny mpiasan'ny horonantsary an'ilay horonantsary, dia boky an-telefaona fotsiny no milahatra amina vatana mba hanome azy ireo ny lafiny amin'ny boky izay jereo daholo.
Ny fiainana faharoa an'i Ron
Ron dia nanana fiainana roa noho ny fiovan'ny hevitr'i JK Rowling ary dia saika hamono ny mahatsara ny RON eo afovoan'ny saga ny mpanoratra araka ny efa notantarainy tamin'ny fotoana maro.
Ny anarana afovoany an'i Harry Potter dia i James, i Ron Bilius, i Hermione Jane ary i Ginny Molly farany. Miseho amin'ny boky samihafa amin'ilay saga izy rehetra.
Ny adin'i Hogwarts
Ny iray amin'ireo mari-pamantarana lehibe amin'ny fiainan'i Harry Potter dia ny Battle of Hogwarts izay nitranga tamin'ny taona 1998, ny taona namoahana ny boky voalohany. Samy hafa be ny teoria momba an'io, na dia mbola tsy nilaza tamintsika momba an'io daty hafahafa io aza i JK Rowling.
Fahaizan'i Harry Potter very
Taorian'ny nandreseny an'i Voldemort tamin'ny faran'ny boky farany tamin'ny saga literatiora dia nanary ny fahaizany miteny Parseltongue i Harry Potter. Izany dia hazavain'ny zava-misy fa tsy mifatotra amin'ny tompo maizina intsony ilay mpamosavy kely.
Teddy Lupine, zanak'andriamanitra majia lehibe
Harry Potter dia tsy nikarakara ny zanany fotsiny ary izany Teddy Lupine, zanakalahin'i Remus sy TonksNotezain'ny renibeny izy, saingy imbetsaka dia nijanona natory tao an-tranon'ny raibeny izay tsy iza fa i Harry.
Ny fahatahorana ny saka Profesora McGonagall
Nilaza izy ireo fa ny biby sy ny ankizy dia manome be dia be ny olana amin'ny ekipa mpanao horonantsary, ary tao amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika Harry Potter dia nisy olana tamin'ny filalaovana gamut an'ny Profesora McGonagall. Nanjavona tamin'ny fotoana iray izy ary tsy vitan'izy ireo intsony ny nahita azy io, tsy maintsy nosoloiny hafa.
Majika maizina sy ny vokany
Ny zavatra iray tsy fantatry ny olona maro dia ny Ny ray aman-drenin'i Neville sy Gilderoy Lockhart dia tsy afaka sitrana tamin'ny toe-javatra majika. Ary misy zavatra ataon'ny majika maizina izay tsy misy mahasitrana na iza na iza.
Ny fanomezam-boninahitra an'i Harry Potter ho an'i Snape
Tsy nanadino an'i Snape sy ny maherifony i Harry Potter, ary ohatra iray amin'izany ny niadiany sy nahitany ny sariny ho talen'ny Hogwarts tafaverina amin'ny toerana sahaza azy ary tsy tokony hihetsika mihitsy.
20 taona izay no lasa hatramin'ny nahavitan'ny boky Harry Potter voalohany tao amin'ny fivarotam-boky ary nanomboka teo dia betsaka ny zava-nitranga, toy ny fanombohana boky maro hafa, sarimihetsika maro ary zavatra maro hafa. Curiosities 20 an'ny tontolon'ny Potter ihany no nolazainay taminareo, saingy azo antoka fa manisa 200 na mihoatra izahay, fa andao hiandry 20 taona farafahakeliny farafaharatsiny, rehefa azo antoka fa ilay mpanao majia malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra dia hitohy ho lasa malaza toy izany koa.
Fantatrao ve ny te hahafanta-javatra mahavariana an'i Harry Potter sy izao rehetra izao manodidina azy?. Lazao anay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, ao amin'ny forum anay na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy izay misy anay ary maniry hamaky izay rehetra holazainao aminay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » General » boky » Harry Potter dia feno 20 taona ary averinay ny curiosities 20 momba ny mpamosavy fanta-daza tamin'ny fotoana rehetra
Ekeko fa tiako ilay saga Harry Potter. Azoko antoka fa hamerina azy io indray andro any. Mahagaga ny eritreritr'i Rowling sy ny fahaizany milaza amintsika tantara mahafinaritra toy izany. Tiako be koa ireo sarimihetsika, saingy mazava ho azy, ireo boky dia toa manazava kokoa sy tsara kokoa.
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Tokony hiaiky aho fa tsy nahatadidy zavatra maro (toy ny anaran'ny sekoly ohatra).